हावादारी गफ गर्ने तर काम नगर्ने प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्ट्राचारीका संरक्षक हुन : नेतृ झाँक्री
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरुको आलोचना गर्ने क्रम बढेको छ । यो बीचमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आउँनु भएको छ । उहाँले संसद विघटन गरेको प्रति पुनः विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले संसद विघटन गर्ने असंबैधानिक कदमको जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
शनिबार ट्विट गर्दै झाँक्रीले वर्तमान सरकारले भ्रष्ट्राचारीको संरक्षण गरेको सत्य भएको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘भ्रष्ट्राचारीको संरक्षण गरेको सत्य हो । हावादारी गफ गर्ने तर काम गर्न नसकेको सत्य हो । काम गर्न सकिन भनेर जाने संसदमा हो । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नै छैन । यस्तो असंबैधानिक ओली कदमको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन ।’
उहाँको यस ट्विटमा एकजनाले प्रतिकृया जनाउँदै, ‘१०० प्रतिशत सही हो, तर तपाईंहरु यसको सामना गर्न कस्को छत्र छायामा पुग्नु भयो नि फेरि ? उस्तै असफल, बदनाम नेता हरु कहाँ ? बिचरा जनतालाई यो कस्तो बिडम्बना ! तपाईंहरु जस्ता होनहार युवा नेताहरुलाई यी म्याद सकिएका नेताहरुबाट छुटकारा पाउने सुनौलो अवसर थियो, गुमाउनु भयो ।’ यसको जवाफमा नेतृ झाँक्री लेख्नुहुन्छ, ‘हिजो प्रचण्डले खड्ग ओलीलाई साथ दिँदासम्म पवित्र ओलीसँग असहमत हुदाँ वित्तिक्कै अछुत यहिको हो विचार भनेको ?’
100% सही हो, तर तपाईं हरु यसको सामना गर्न कस्को छत्र छायामा पुग्नु भयो नि फेरि? उस्तै असफल, बदनाम नेता हरु कहाँ? बिचरा जनतालाई यो कस्तो बिडम्बना! तपाईंहरु जस्ता होनहार युवा नेताहरिलाई यी date expired नेताहरुबाट छुटकारा पाउने सुनौलो अवसर थियो, गुमाउनु भयो।
— Krishna Joshi (@krishna_joshi01) January 2, 2021